एउटा कठोर दैनिकी
हिमाल खरेल, (हाल: बिर्तामोड)
"जागिर खोजीको सिलसिलामा म गाउबाट बिर्तामोड आएको पाँच महिना भइसकेको छ । धेरै अभिलाषा थिए । एघार पढ्दै कुनै प्रतिष्ठानमा आफु सुहाउँदो काम गर्ने योजनासाथ गाउँकै उच्च माविमा नपढेर बिर्तामोड हानिएकी थिएँ । साइडतिर डेरा लिएर क्याम्पसमा सँगै पढ्ने इलामकी सन्ध्या र म रुममेट बन्यौँ । दिनहरु बित्दै गए । शिशिरपछि बसन्त आउँथ्यो । पातहरु ओइलिएर पुनः पालुवा फेर्थे । तर हाम्रो स्थिति स्थिर थियो । झर्झराउँदो उमेरमा पनि हामी सधैँ उस्तै थियौँ । कति रातहरु बेस्वादिला बनिदिन्थे । सपनाहरु खल्लो भइदिन्थे । क्रमशः दिनरात छिचोल्दै गइरहेका थियौँ हामी । संसारमा सबैभन्दा पहिले भोकले आक्रान्त नानीहरुको निद्रा खुल्छ कि पश्चातापका कारण आपुूले बिताइआएको भूत आपुूसँग नमिल्दो वर्तमानको टकरावको कारणले युवाप्रेमीहरुको निद्रा खुल्छ । तर अचानक म मध्यरातमा ब्यूँझिन थालेकी छु ।
'नयाँ घरुमा आहुतिले लेखका छन् मुटु चिमोट्ने घटनाक्रमहरुको केन्द्रविन्दूमा बाँचेको एक्लो जीवन खै त्यसको कुनै ठेगान होलाजस्तो नै छैन । ती निष्ठुरी रातहरुका पीडामय क्षणहरु जसलाई म कहिल्यै भूल्न सक्तिनँ । मेरो मुटुमा नीलकाँडा बिझेझैँ चर्किन्छ । मुटु गाँठो परिरहन्छ । र आँखामा आँसु छचल्किएपछि मात्रै म शान्त हुन्छु ।' अर्थात् बारम्बार म मेरो दैनिकी गुजार्ने समस्याबाट ग्रसित हुँदै थिएँ । सन्ध्याको पनि उस्तै । झापाका अखबारहरुमा छापिएका जागिर-सूचना हामी फेददेखि टुप्पैसम्म पढ्थ्यौँ । निवेदन पनि दिन्थ्यौँ । तर हातलागी शून्य । कलेजमा अन्य साथीहरुका तुलनामा हामी प्रष्टै चिनिन्थ्यौँ । हामी अत्यन्त दरिद्र छौँ भन्ने उनीहरुलाई बुझ्न कुनै समस्या छैन हाम्रो पहिरन व्यवहार इत्यादिबाट । आफुलाई मानसिक अपमानको महसुस भएर पनि चूपचाप कलेज धाउनको विकल्प हामीसँग थिएन । घरिघरि हामी पागलपनको भुमरीमा फँस्न बाध्य थियौँ । हामी दुवैको समस्या सालाखाला एकै किसिमको छ । यति हो ऊ इलामतिरकी क्षेत्रीकी छोरी म दक्षिण झापाकी रैथाने । पैसाले मानिसलाई जे पनि बनाइदिन्छ । पैसाका निम्ति हाम्रो जीवन उजाड बन्न सक्छ र चम्किलो पनि । बिर्तामोडको अत्यासलाग्दो भीडमा कहाँकहाँका मनुष्य के खोज्न आएका होलान् उनीहरुले बिर्तामोडको पागल लट्टेलाई देखेका र चिनेका छन् कि छैनन् ?
मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुईवटा घटना भइदिन्छन् । एउटा घटनाले जीवनको सुरुआत गर्छ । अर्कोले अन्त्य । के म वर्तमानप्रति उदासीन छु? अहँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन । के म भविष्यप्रति निराश छु ? अहँ त्यस्तो त हुँदैहुँदैन । मेरो सिङ्गो जीवन यही उदासीनता र निराशासँगको भयानक युद्धबाट गुज्रेको छ र आफ्ना दुःखमय स्मृतिहरु मैले ज्ञानको रुपमा सँगालेको छु । तब म कसरी वर्तमानप्रति उदासीन बन्न सक्छु भविष्यप्रति कसरी निराश बन्न सक्छु होइन जीवन निराशा र शून्यता त हुँदै होइन । त्यसो भए सत्र वर्षकै झर्झराउँदो वैँशालु उमेरमा तन्नेरी रगतको बाबजुद शिशिर यामको उजाड बकाइनोको रुखजस्तो उराठलाग्दो मेरो वर्तमान स्थिति किन भएको त बिर्तामोडमा अल्मलिइरहेका कयौँ पात्रहरुझैँ म पनि रणभुल्लमा परेकी छु । यहाँ अनेक किसिमका मानिसहरु बस्छन् । सबै आफ्नै सुरमा हुन्छन् । बाइकमा कुदिरहेका । मोबाइलमा गर्जिरहेका । तरकारी-फलफूल बेचिरहेका । अखबारमा इतिहास उधिनिरहेका । अँध्यारो गल्लीबाट फुत्त बाहिर निस्किरहेका । मुक्तिचोकमा बाटो अल्मलिइरहेका । सबैथोक बिसेर हरसमय मदहोसी बनेर बिन्दास जिन्दगी बिताइरहेका दिनरात रासलीला मेटाइरहेका स्त्रीहरु । र स्त्री-लम्पटहरु ।
'बिर्तामोडमा गरिखान दिउँसो कसले के गर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन भन्नु ऐना जत्तिकै कुरालाई छोप्न खोज्नु हो । बरु साँझ पर्दैगर्दा गोधूलिदेखि नै कामका लागि तयार हुनेहरुका बारेमा थोरैलाई थाहा हुन्छ ।' कुनै स्त्रीको आत्मपत्रको एक अंश ।
गफ गर्दे जाँदा बिर्तामोडको एक कलेजमा पढ्दै गरेकी ती बहिनी र म क्याफेतिर पसेर मज्जाले गफिन थाल्यौँ । मैले तिनलाई कलेज ड्रेसमा देखेको थिएँ । उनको गफ लामै भएकाले मैले सन्ध्या र उनलाई त्यतातिर जान भनेको हो । तर उनीहरुले मलाई निस्फिक्री सेक्सका लागि अनौपचारिक आग्रह गर्दै गए । उनीहरुको हाउभाउ कामोत्तेजक भन्छन् मान्छेहरु मलाई त्यस्तै अनुभव भइरहेको थियो । गर्लफ़ेन्डकी गर्लप्रेन्डका साथ क्याफेमा अरुले बिताएका होलान् । तर एक्कासि लोडसेडिङले गाढा अँध्यारोझैँ मैनबत्तीले धिपधिपाइरहेको कुनै साँघुरो कोठामा भएको मैले आपुूलाई पाएँ । हर्ष र यौवनले पाखुरामा उमि्रएका मसिना काँडालाई सुम्सुम्याउँदै कुनै सुन्दरीको ओठको किताबमा आफ्ना ओठका अटोग्राफ भर्नुको आनन्द कस्तो होला भुत्रुक्क अँध्यारोको गाढा कालो गुफा चिर्दै ऊ मेरो अगाडि आएकी थिई । हे प्रभू ! मेरो पइँतालाबाट मसिनो झन्झनाहट तालुसम्म पुगेकेा थियो । म फुत्त बाहिर निस्किएँ । म उनीहरुले नदेख्नेगरी अर्कै बाटो भागेँ ।
मेरो प्रेमको क्यानभासमा खै केको रङ पोतिएको छ ! पत्तै छैन । गल्लीको नेपथ्यबाट कसैले बोलाइरहेको छ ुदादा एकछिन् पर्खिनु न ।ु ओहो अगाडि भेटिएका स्त्री पो । चिप्ले कीराको मेरो गति बढाएँ । उनीहरु अर्कै गल्लीबाट छिरेर ठ्याक्क मेरै सामुन्ने आइपुगे । अब भएन त फसाद् ! यसबेला भने उनीहरुले आफ्नो डेरातिर पुर्याए मलाई । ुटिरिङ…।टिरिङु कसैले मोबाइल रिसिभ गर्न भनेपछि म कोठा बाहिर निस्किएँ । कुराकानी सकेर एकछिन् बाहिरै बसेँ । यी दुई मस्त युवती ुमस्तु गफमा थिए । बीचबीचमा अश्लील शब्द घुसाउँथे । स्त्रीको जनेन्द्रिय बोध गराउने शब्द । म भित्र पसेँ । अहिले भने अवस्था अलि बेग्लै छ । तलबाट चिसो माथि सरिरहेको थियो । पारोझैँ । २५ पुस । थस्र-डे । विद्युत प्राधिकरणले एक टुक्रा उज्यालो बिर्तामोडमा हुत्याइदिएको थियो ।
अघिल्लोपटक मैले भेटेको आत्मपत्र उनै झापाली रैथाने र सन्ध्याको रहेछ । पढाइ खर्च र अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न यिनीहरुले थालेको काम साँच्चै बाध्यात्मक थियो । यौन प्राकृतिक आवश्यकता हो । सबैले यसै भन्छन् । जब रेडियोको ब्याट्री सकिन्छ कि त नयाँ ब्याट्री किनिन्छ कि त ब्याट्री सुकाइन्छ । यौन भनेकै जीवनको रिचार्ज हो । तर उनीहरुको यौन रोमााचक छैन । दैनिक आठ-दससम्म लक्काजवान पुरुषको तृष्णा मेटाउन उनीहरु बानी परिसकेकाछन् रे । पल्किएका ग्राहक आउन किन बिराउँथे र कमाई मालामाल भएपछि कलेज-टाइम बाहेकको समय होटलमै बित्छ रे । यो समयमा मैले मेरी प्रेमिकालाई सम्झिएँ । यी पनि कसैका पे्रमिका होलान् आचकाल स्कूल छाड्ने बित्तिकै लभको लाइन समात्ने परम्परा सुरु भइसकेको छ ।
जीवन दिनदिनै अन्धकार बन्दैछ । हर्ष न विस्मत् । गाजल लगाउँदा युवतीहरु सुन्दर देखिन्छन् । मलाई यस्तो मनपर्छ । अझ ठूला लोलाएका आँखा हुन् । तर स्त्रीको गाजलबाट जीवनको गाजलसम्म उक्लिन सजिलो छ्रैन । जीवनको गाजल लाउन जाने अझ सुन्दर लाउन नजाने झन् कुरुप । गर्लप्रेन्ड टिनेजमा यस्तै सुन्दर चीज हो । ब्वाईप्रुेन्ड पनि । कलेजमा पढ्दैगर्दा खर्च अभावमा क्याम्पसे स्त्रीहरु जसरी कुमारित्व गुमाउन सहमत बन्दैछन् त्यसरी जीवन पनि मकाउँदै कच्याक्कुचुक बन्न के बेर । थाहा पाईपाई जवानीमा बृद्ध हुन तयार भइरहेका यिनीहरुको बाध्यता कसले बुझेको छ मध्यरातसम्म आइय्या-आत्था नभनी पुरुष भोगाउने ुसाहसु बोक्ने यिनीहरुको जीवन कस्तो हुने हो कुन्नि यस्तै-यस्तै सम्झँदै म गल्ली-गल्ली मुक्तिचोक निस्कँदै थिएँ पे्रमिकालाई फोन गर्दै । मैले त्यो दिन कम्तीमा ८७ पटक उनको नाम रिडायल गरेँ । र साँझपख उनको मोबाइलमा एउटी युवती कराई झिँजो लाग्नेगरी - माफ गर्नुहोला तपाईंले सम्पर्क गर्नु खोज्न भएको मोबाइलको स्वीच अफ् गरिएको छ ।
himal malai ta sarai man paryo yar